एक घाइते अन्य फरार
जनकराज सापकोटा , आश्विन ६, २०७४
काठमाडौंको पुरानो सिनामंगलस्थित पेप्पसीकोलाको मनोहराको पुल नजिक प्रहरी र गुण्डाको समुहबीच गोली हानाहान भएको छ । गोली हानाहान हुँदा प्रहरीको गोली लागि रामेश्वर गौतम घाइते भएका छन् ।
यस्तो छ २ नम्बर प्रदेशको ताजा नतिजा (सूचीसहित)
स्थानीय तह तेस्रो चरण निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रदेश नम्बर २ का १ सय ३५ स्थानीय तहमा असोज २ गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । तर, धिमा गतिमा मतगणना भएकाले अन्तिम परिणाम आउन भने ढिलाइ भएको छ ।
बिरामीको मृत्युमा डाक्टरबाट क्षतिपूर्ति निर्णय : आन्दोलनसँगै पछि हट्यो सरकार
विज्ञप्तिकै भरमा आन्दोलन फिर्ता लिन्नौं : चिकित्सक संघ
अस्पातलमा उपचार गर्ने क्रममा बिरामीको मृत्‍यु भएको खण्डमा डाक्टर आफैंले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भन्ने कानुनको तयारीविरुद्ध बिहीबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै चिकित्सक समाज नेपालमा आवद्ध चिकित्सकहरु ।
कुलचन्द्र न्यौपाने/स्वरूप आचार्य, काठमाडौं, आश्विन ६, २०७४
चिकित्सकको लापरबाहीले कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा सम्बन्धित चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको सरकार अन्तत: पछि हटेको छ । सरकारको निर्णयलाई लिएर मेडिकल एसोसिएसन (एनएमए) ले देशभरका अस्पतालको सेवा बन्द गराउँदै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
बीरगञ्जमा कडा प्रतिस्पर्धा, जनकपुरमा राजपा दोब्बरले अघि, जीतपुर सिमरामा एमाले अगाडि
प्रदेश २ को एक महानगरपालिका र दुई उपमहानगरपालिकामा काँग्रेस, राजपा र एमालेको अग्रता देखिएको छ । बीरगञ्जमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ भने मधेस आन्दोलनको केन्द्र जनकपुरमा राजपा दोब्बरले अघि छन् । बाराको जीतपुर सिमरामा भने एमाले अगाडि देखिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
पूर्वराष्ट्रपति यादव भन्छन्, 'पैसावालाले टिकट पाए, इमान्दार व्यक्तिले कसरी निर्वाचन लड्न सक्छन्'
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले निर्वाचनमा लामो समयदेखि दलमा मूल्य मान्यतामा आस्थावान तथा निष्ठावान् व्यक्तिले टिकट नपाई क्रसर र डोजर उद्योगी तथा पैसावालाले पाएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रश्न गरे, 'मैले सुनेँ स्थानीय तहका निर्वाचनमा वडाध्यक्ष हुनका लागि रु ५० लाख र गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुख हुन रु एक करोडसम्म खर्च भयो, यस्तो अवस्था हो भने कसरी इमान्दार र निष्ठावान् व्यक्तिले निर्वाचन लड्न सक्छन् ।” पूरा पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधान दिवस मनाएर मात्र अमेरिका आउने भएपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रात्रिभोजमा सहभागी हुने तय भएको थियो । महराले ट्रम्पसँग पनि संक्षिप्त छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यहाँ कसरी प्रवेश गर्नेलगायतका सबै विषयमा ब्रिफिङसमेत भएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
रामेछापमा बस दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु
टीकाप्रसाद भट्ट, आश्विन ६, २०७४
रामेछाप नगरपालिकाको वितिटारमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको ज्यान गएको छ । १८ घाइते भएका छन । दुर्घटनामा २ जनाको घटनास्थलमानै र १ जनाको अस्पताल ल्याउदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
श्यामसुन्दर शशि, आश्विन ६, २०७४
धनुषाको कमला नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका रामउद्गार गोइत विजय भएका छन् । गोइतले ४ हजार २० मत ल्याए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी संघीय समाजवादी फोरमका पशुपति यादवलाई हराएका हुन् । यादवले २ हजार ६ सय ९६ मत मात्र ल्याउन सफल भए ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्हाले कार्यभार
अवधेशकुमार झा, आश्विन ६, २०७४
सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शुक्रवार पद तथा गोपनीयताबको सपथ लिदै कार्यभार सम्हालेका छन् । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लिलाम्बर यादव र जंजिरादेबी यादब बिहीवार विजयी एका थिए ।
बलरा नगरपालिकामा राजपाको जित
बलरा नगरपालिकामा राजपाले मेयर र उपमेयर पदमा विजय हासिल गरेको छ । शुक्रबार साँझ मतगणना सकिएको हो ।
वाग्मती नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका उमेदवार विजयी
वाग्मती नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका मेयर र उपमेयर विजयी भएका छन् । मेयरमा भरतकुमार थापाले ७ हजार २ सय ८१ मत ल्याएर जिल्लामा माओवादी तर्फबाट पहिलो जित हासिल गरेका हुन् ।
सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण कांग्रेस विजयी
सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै जितेको छ ।
सिरहाको सुखीपुरमा एमाले विजयी
भरत जर्घामगर, आश्विन ६, २०७४
सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । मेयरमा एमालेका रामऔतार यादव ६ हजार १ सय ११ मत ल्याई विजयी भएका हुन् ।
धनुषाको लक्ष्मीनियामा संघीय समाजवादी फोरम विजयी
सन्तोष सिंह, आश्विन ६, २०७४
धनुषाको लक्ष्मीनियामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल विजयी भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका विन्देश्वर यादव प्रमुखमा र ईन्द्रकला यादव उपप्रमुखमा विजय भएका हुन् ।
धनुषाको धनुषाधाममा नेपाली काग्रेस विजयी
धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिमा प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका बालेश्वर मण्डलर उपप्रमुखमा विद्यादेवी भुजेल विजयी भएका छन् । प्रमुखमा विजय भएका बालेश्वरले ४ हजार ७ सय ७३ मत प्राप्त गरे । उनका प्रति प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका योग कुमारले ३ हजार ५ सय ५७ मत प्राप्त गरे ।
रामेछापमा बस दुर्घटना हुँदा ३ को मृत्यु/ १८ घाइतेमध्ये ४ को अवस्था गम्भीर
तीव्र गतिमा रहेका कारण ओरालोको घुम्तीमा मोडिन नभ्याएकाले बस सडकबाट खस्दा ३ यात्रुको मृत्यु भएको छ । १८ जना घाइते भएका छन् ।
पूर्वी नवलपरासीको नाम ‘नवलपुर जिल्ला’ र सदरमुकाम कावासोतीमा राख्ने निर्णय
नारायण शर्मा, आश्विन ६, २०७४
प्रदेश नम्बर ४ मा पर्ने पूर्वी नवलपरासीको पहिलो जिल्ला सभाले जिल्लाको नाम नवलपुर र त्यसको सदरमुकाम कावासोतीमा राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
आयोगले माग्यो दस्तखत नमुना
निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ : दाहाल
पहिरोले तीन दिनदेखी बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध
कान्तिपुर संवाददाता , भाद्र २८, २०७४
चन्द्रदेव भट्ट, आश्विन ६, २०७४
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । दूरदराजमा बसोबास गरेर जीवनयापन गर्नेहरू अब साँच्चै प्रजातन्त्र र विकासको अनुभूति गर्न पाइनेछ र जीवनयापन गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने आश लिएर बसेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
गाउँ–नगर समृद्धिको यात्रा
सम्पादकीय, आश्विन ६, २०७४
पुन:संरचना गरेर अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनधि छान्ने चुनाव सकिएको छ । वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गराइएको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम, आश्विन ६, २०७४
स्थानीय तहका लागि तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टै परेको संविधान दिवस तीन प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका लागि निकै सुखद् हुनपुग्यो । किनभने मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलन र भारतद्वारा लगातारको असहयोगका कारण विगत दुई चरणमा रोकिएको प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
मकर श्रेष्ठ, आश्विन ६, २०७४
सभामुख ओन्सरी घर्ती मगरले संसद्मा शिक्षा ऐन संशोधनको पक्ष–विपक्षको मतदान गराइरहँदा सांसद प्रेम सुवालले गणपुरक संख्यामा प्रश्न उठाए । सभामुखले संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई तीन मिनेटको समय दिएर सांसदको संख्या यकिन गर्न समय दिइन् । पूरा पढ्नुहोस्
डा. सुजितकुमार झा, आश्विन ६, २०७४
‘राज्य कमजोर छ, मेडिकल माफियाको विगविगी छ, प्राविधिक पक्ष डाक्टरतर्फ लाग्छ । मान्छे मरेपछि ५/७ लाखको औषधी मगाउँछ, बिरामी रिफर गर्न मान्दैन, पैसा नपाई लास उठाउन पनि दिँदैन । शक्ति यिनकै हातमा छ । पूरा पढ्नुहोस्
डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली, आश्विन ६, २०७४
कम्प्युटर शिक्षण आफैमा रमाइलो र अप्ठ्यारो विषय हो । प्राविधिक विषय हुनाले यसको अध्ययन र अध्यापनमा निरसपन हुँदैन । अंग्रेजी वा गणितजस्तो विद्यार्थीले सम्झन अल्छी मान्ने खालको विषय पनि होइन यो । एउटा शिक्षकले जसरी विद्यार्थीलाई गणित पढाउँदा दिक्कलाग्दो हुन्छ, त्यस विपरीत कम्प्युटर पढाउँदा विद्यार्थीहरू बढी रमाउँछन् । पूरा पढ्नुहोस्
सुशीला कार्की, आश्विन ५, २०७४
४० वर्षअघि वकालत गर्न जाँदा अदालतमा कर्मचारीले जथाभावी लिने, खाने गरेको देखिँदैनथ्यो । सुरु–सुरुमा सबैसँंग खुलेर कुरा गर्न पनि सकिँदैनथ्यो । अझ म त महिला परेँ । मुद्दाका पक्षहरूले रिझाउन दही, दूध कोशेली ल्याइदिए कर्मचारी त्यसैमा रमाउँथे । पूरा पढ्नुहोस्
बालबालिकाको भविष्यमा खेलबाड
सम्पादकीय, आश्विन ५, २०७४
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भएको एक वर्षमै त्यही प्रयोजनका लागि नवौं संशोधन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षा धराशायी बनाउने गरी नवौं संशोधन नगर्न चौतर्फी आवाज उठ्दै आए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक मंगलबार पारित भएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
बेलायतको जीवनशैली सिक्दै भूपू लाहुरे परिवार
गणेश राई, आश्विन ५, २०७४
फ्रान्बरोस्थित कम्युनिटी सेन्टरको हलमा पुग्दा एक हूल बुढयौली उमेरका महिला रातो सारी, चोलो लगाएर नेपाली दोहोरी गीतमा छमछमी नाचिरहेका थिए । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन पुरुषहरू जुटेका थिए ।
नबिन पोखरेल, आश्विन ३, २०७४
बेलायतमा कार्यरत नेपाली सञ्चारकर्मीहरुले सोमबार बेलायती संसद भवन (हाउस अफ पार्लियामेन्ट) अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाको आयोजनामा भएको उक्त भ्रमणमा सञ्चारकर्मीहरुले बेलायतको संसदीय व्यवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।
साफ यू–१८ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत दोस्रो खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई २–० ले पराजित गरेको छ । जितसँगै नेपालले प्रतियोगितामा पहिलो अंक जोड्यो । पूरा पढ्नुहोस्
नेपाल र भारत बराबरीमा
एएफसी यू-१६ च्याम्पियनसिपको छनोट चरण अन्तर्गत समूह 'डी'को दोस्रो खेलमा नेपाल र भारतका खेलाडीहरु भिड्दै।तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ
एएफसी यू-१६ च्याम्पियनसिपको छनोट चरण अन्तर्गत समूह 'डी'को दोस्रो खेलमा नेपाल र भारतको खेल बराबरीमा सकिएको छ । पहिलो हाफ गोलरहित रहेकोमा दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले २/२ गोल गरे । पूरा पढ्नुहोस्
एएफपी, आश्विन ६, २०७४
लेभान्टेले स्पेनी ला लिगामा बिहीबार राति रियल सोसिडाडलाई ३–० ले हरायो र अंक तालिकाको पाँचौं स्थानमा उक्लिन सफल रह्यो । पूरा पढ्नुहोस्
दोस्रो वान डे वासआउट
इंग्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजबीच बिहीबार राति ट्रेन्ट ब्रिजमा भएको दोस्रो वान डे वर्षाका कारण वास आउट भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
चेन्नईको मिलापोर रिक्रिएसन क्लबविरुद्ध शतक बनाएपछि नेपालका ज्ञानेन्द्र मल्ल । तस्बिर: रमन
उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको शतकपछि नेपालले दोस्रो अभ्यास खेलमा पनि जित हात पारेको छ । हङकङसँग हुने विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको खेललाई तयारी गर्न भारतमा रहेको नेपालले बिहीबार चेन्नईको स्थानीय टोली मिलापोर रिक्रिएसन क्लबलाई ५२ रनले पराजित गरेको हो । पूरा पढ्नुहोस्
भारतसँग जित्नैपर्ने दबाब
एएफसी यू–१६ च्याम्पियनसिपको छनोट चरणअन्तर्गत नेपालले शुक्रबार समूह ‘डी’ को दोस्रो खेलमा छिमेकी टोली भारतको सामना गर्दै छ । नेपाल पहिलो खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन इराकसँग १–० ले पराजित भएको थियो । प्यालेस्टाइनमाथि ३–० को विजय नतिजा निकालेको भारत भने बलियो अवस्थामा छ । नेपालले छनोटको आशा जीवितै राख्न भारतलाई पराजित गर्नैपर्छ । पूरा पढ्नुहोस्
बंगलादेशविरुद्ध नेपाल विजयी
त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा बिहीबार सुरु अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण कबड्डी प्रतियोगितामा भिड्दै नेपाल र बंगलादेश (हरियो) । कविन अधिकारी
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण पुरुष कबड्डी प्रतियोगितामा बिहीबार विजयी सुरुआत गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा नेपालले बंगलादेशलाई ३७–३५ अंकले पराजित गर्‍यो । नेपालका विजय चन्द उत्कृष्ट रेडर र बंगलादेशका तुहिन उत्कृष्ट डिफेन्डर चुनिए । पूरा पढ्नुहोस्
आर्मी १३ स्वर्णसहित च्याम्पियन
गणेशमान स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङमा बिहीबार फाइनल भिड्दै आर्मी र एपीएफका महिला खेलाडी । इलिट जोशी
वसन्तपुर डबलीमा बिहीबार सम्पन्न दोस्रो वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खुला बक्सिङमा आर्मीले १३ स्वर्णसहित टिम च्याम्पियनको ट्रफी जितेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
खसीबोका आयातमा लापरबाही
राजु चौधरी, आश्विन ६, २०७४
चाडलाई लक्षित गरी आयात भइरहेका खसीबोका मरेका र बिरामी फेला परेका छन् । पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र पशुसेवा विभागले संयुक्त रूपमा गरेको अनुगमन यस्तो फेला परेको हो ।
हडताल निरुत्साहित गर्ने नयाँ श्रम ऐन
होम कार्की, आश्विन ६, २०७४
सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन हडताललाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याएको नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनसँगै श्रम ऐन २०४८, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ऐन २०३९, निवृत्त कोष ऐन २०४२ खारेज भएका छन् ।
राज्यमन्त्री बजार अनुगमनमा
भवानी भट्ट, आश्विन ६, २०७४
दसैंको मुखमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र अखाद्य वस्तुको बिक्री रोक्न आपूर्ति राज्यमन्त्री कर्ण विक बजार अनुगमनमा खटिएका छन् । राज्यमन्त्री विक बिहीबार विभिन्न विभागका कर्मचारीसहित बजार अनुगमनमा लागेका हुन् ।
कृष्णप्रसाद गौतम, आश्विन ६, २०७४
यस वर्ष भारतीय व्यापारीले कृष्णनगर नाकाबाट खसीबोका नेपाल भित्र्याएका छन् । नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध हुने समस्याका कारण कृष्णनगर नाका प्रयोग गरिएको हो ।
अत्याधुनिक बस सेवा
राजधानीबाट पोखराका लागि पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले आधुनिक सुविधायुक्त बस थपेको छ । शुक्रबार पोखराबाट र शनिबार काठमाडौंबाट सञ्चालन सुरु हुने उक्त बस मुलुकमा हालसम्म भित्र्याइएकामध्ये सर्वाधिक महँगो र सुविधायुक्त रहेको समितिले जनाएको छ ।
अझै पुगेनन् गाउँमा बैंक
वीरेन्द्र केसी, आश्विन ६, २०७४
जिल्लाका छवटा स्थानीय तहमध्ये चारमा अझै बैंक पुगेका छैनन् । सन्धिखर्क र शीतगंगा नगरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेवा भए पनि भूमिकास्थान नगर, पाणिनि, मालारानी र छत्रदेव गाउँपालिकामा यो सुविधा नभएको हो ।
३० वर्षे हटाउन गभर्नरको दबाब
यज्ञ बञ्जाडे, आश्विन ५, २०७४
वित्तीय सुधारको मर्म विपरीत केन्द्रीय बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सञ्चालक समितिलगायत अन्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई तीव्र दबाब दिन थालेका छन् ।
कर छलीमा ५ सय फर्मलाई कारबाही
राजु चौधरी, आश्विन ५, २०७४
आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गर्ने ५ सय ९ करदातालाई कारबाही गरेको छ । अनुगमनको क्रममा व्यवसायीले उपभोक्तासँग उच्च मूल्य असुुल गर्ने, बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून बीजकीकरणलगायत फेला परेपछि कारबाही गरेको हो ।
धनुषाको कमला नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी - ०९:२५ PMरामेछापमा बस दुर्घटना हुँदा ३ को मृत्यु/ १८ घाइतेमध्ये ४ को अवस्था गम्भीर - ०९:०५ PMपूर्वी नवलपरासीको नाम ‘नवलपुर जिल्ला’ र सदरमुकाम कावासोतीमा राख्ने निर्णय - ०८:३५ PMआयोगले माग्यो दस्तखत नमुना - ०८:१४ PMबिरामीको मृत्युमा डाक्टरबाट क्षतिपूर्ति निर्णय : आन्दोलनसँगै पछि हट्यो सरकार - ०८:०९ PMप्रेस काउन्सिलद्वारा पत्रकारहरुलाई पुरस्कार प्रदान - ०७:५५ PM‘मदन पुरस्कार’ कँडेल र ‘जगदम्बाश्री’ वात्सायनलाई प्रदान - ०७:२२ PM
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ३, २०७४
संविधानमा कसैको विमति छैन : सुवासचन्द्र नेम्वाङतातोपानी नाका खोल्न चिनियाँ पक्ष हतारिएका छन् : महरा‘चीनको रेल आउने कुरा हाम्रो तयारीमा निर्भर’मधेसमा स्थानीय चुनावले बढाएको अपेक्षा
प्रेस काउन्सिलद्वारा पत्रकारहरुलाई पुरस्कार प्रदान
प्रेस काउन्सिल नेपालको ४८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न विधामा पत्रकारहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
कान्तिपुरकर्मी चौधरीलाई सम्मानपहिरोमा मालिकसहित १५ भेँडा मरे खोलाले बगाएर एक बेपत्ता दसैंका यात्रुलाई पहिरोको तगारो
‘ऐश्वर्य’ ट्रेलरले बढायो आस
त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित फिल्म ‘ऐश्वर्य’ को बिहीबार ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । दिवाकर भट्टराई निर्देशित उक्त फिल्मको ट्रेलरमा एक युवतीका लागि दुई युवाबीचको टकराव देख्न सकिन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
जो गुगलमा बारम्बार खोजिए
करिना कपुर बलिउडकी ख्यातिप्राप्त अभिनेत्री हुन् । उनीबारे मिडियाले सकेसम्म धेरै जानकारी दिन खोजिरहेको हुन्छ । झन्डै दुई दशकदेखि फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी उनी राम्रै मिडिया कभरेज पाइरहेकी पनि छन् । पूरा पढ्नुहोस्
प्रियंकाको ‘छोटो चोली’ माथि फोकस
यसअघि ‘सरी...’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको ‘फाटेको जुत्ता’ निर्माण पक्षले बुधबार नयाँ आइटम गीत ‘चोली...’ युटयुबमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । ‘चोली अलि छोटो के लाएथें, यो सारा सहरले लगायो मैमाथि फोकस...’ भन्दै उक्त गीतमा नायिका प्रियंका कार्की बोल्ड अवतारसहित नाचेकी छन् । पूरा पढ्नुहोस्
योजनाको ‘भगायो ड्राइभरले’
सञ्चारकर्मी तथा गायिका योजना पुरीको नयाँगीत ‘भगायो डाइबरले’ गीतको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । चर्चित ढुङ्गेलको शब्द र विनय केटुको संगीत संयोजन रहेको गीतमा गौरभ दर्पणको संगीत रहेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
धुर्मुसको जन्मदिनमा रौतहटमा एकीकृत वस्ती शिलान्यास
बुधबार बिहान सिताराम कट्टेल (धुर्मुस), कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)को साथमा बस्तीकै १०७ वर्षीया रामकलिया देवी हजारा वस्ती शिलान्यास गर्दै ।
कान्तिपुर संवाददाता , आश्विन ४, २०७४
कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले आफ्नो जन्मदिन पारेर रौतहटका बाढीपिडितहरुका लागी एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्तीको शिलान्यास गरेका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका– ८ स्थित सन्तपुर गाउँका ४५ बाढीपिडितहरुका लागी धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनको चौथो परियोजना अन्तर्गतको ‘एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती’ शिलान्यास गरिएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
विन्टर र समरको बीचमा पर्छ दसैं । यस्तो बेला न चिसो न गर्मी । फेसन फ्लोअरलाई यो जस्तो अनुकूल वातावरण के हुन सक्ला ? सबैलाई यति बेला दसैंको मुडले छोपिसकेको छ । त्यहीअनुरूप बजारको चहलपहल पनि बढेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
ओलम्पिक पार्कमा नेपथ्य गुन्जिने
कोरियाली राजधानी सोलमा सन् १९८८ मा बनेको थियो– ओलम्पिक पार्क । कोरियाली सरकारले सन् २०११ मा कन्सर्ट हलका रूपमा पुनर्निर्माण गरेपछि डिप पर्पल, जुदास प्रिस्ट, मराया क्यारे र एयर सप्लाईजस्ता विश्वप्रसिद्ध टोलीले सांगीतिक प्रस्तुति दिइसकेका छन् यो थलोमा । पूरा पढ्नुहोस्
‘अन्याय सहने कि प्रतिवाद गर्ने ?’
‘इन अ बेटर वल्र्ड’ को एउटा दृश्य ।
सन् २०११ को एकेडेमी अवार्डमा ‘इन अ बेटर वल्र्ड’ बेस्ट फरेन ल्यांग्वेज फिल्ममा उत्कृष्ट भएको थाहा पाउँदा पत्रकार एवं कवि अभय श्रेष्ठ ताली पिट्ने मुडमा थिएनन् । उक्त विधामा ‘ब्युटिफुल’, ‘डगटुथ’ जस्ता फिल्म पनि छानिएका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ ? हाथ, खुट्टाका नङहरुको रंगले पनि तपाईंको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिन सक्छन् । नङमा देखिने सेतो दाग, गुलाबीपन या धर्सो हुनुको अर्थ हो- शरीरमा कतै-कुनै गम्भिर प्रकृतिको रोग अदृश्यरुपमा पलाइरहेको छ । जस्तै- लिभर, मुटु, फोक्सो, छाला एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भन्ने कुराको प्रमाण व्याक्तिको नङबाट पनि थाहा हुन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको ‘फर्मूला दूध’ खुल्लम खुला बिक्रीआँखा र आँसुके हो दादुरा ?बोसोले बेफाइदा मात्रै गर्दैन
रोहिंग्या समस्या समाधानमा अपेक्षित भारत, चीन र सुकीको भूमिका
कमलदेव भट्टराई, आश्विन १, २०७४
यतिखेर म्यानमार सरकारलाई रोहिंग्या समुदायमाथि सुरक्षा निकायबाट भएको आक्रमण रोक्न अन्तराष्ट्रिय समुदायको तिव्र दवाव छ । वढ्दो हिंसाका कारण सो समुदाय आफ्नो मुलुक छाडेर छिमेकी मुलुकहरुमा शरणार्थी बन्न वाध्य भएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि हजारे अभियानजिते एनआरएन, हारे पलायन अमेरिका अनुभव : भोगेका र देखेका राम्रा कुराहरु हामी कति स्वार्थी!
थप प्रतिबन्धले फरक पर्दैन : किम
बीबीसी, आश्विन ४, २०७४
उत्तर कोरियाले थप प्रतिबन्धले आफूलाई केही फरक नपर्ने बरु परमाणु कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन सहयोग पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ । प्योङयाङले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएका नयाँ नाकाबन्दी ‘अनैतिक तथा अमानवीय’ भएको संज्ञा दिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
बीबीसी/सीएनएन, आश्विन ४, २०७४
म्यान्मारमा जारी हिंसापछि रोहिंग्या शरणार्थीबारे मौन रहेकोमा चर्को आलोचना खेपिरहेकी म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सुकीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानी’ बाट आफ्नो सरकारलाई कुनै डर नभएको बताएकी छन् । पूरा पढ्नुहोस्
उत्तर कोरियालाई ‘ध्वस्त पार्ने चेतावनी’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसंघमा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै अमेरिका र यसका पक्षधरको रक्षा गर्न उत्तर कोरियालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मध्य मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्पको झट्का
एजेन्सी, आश्विन ४, २०७४
मेक्सिकोमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार उक्त भूकम्पको तीब्रता ७.१ म्याग्निच्युट मापन गरिएको छ। सिएनएनका अनुसार भूकम्पमा परी अहिलेसम्म कम्तीमा ११६ जनाको ज्यान गएको छ । भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या अझै धेरै हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
बीबीसी/रोयटर्स, आश्विन ३, २०७४
क्यारेबियन क्षेत्रमा दुई साताअघिको आँधी ‘इर्मा’को असर नसकिँदै अर्को शक्तिशाली आँधीको गएको छ । ‘मारिया’ नामको आँधीले लगभग इर्माकै बाटोमा पछयाइरहेको र भयावह क्षति पुर्‍याइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मदन पुरस्कार गुठीले विसं २०७३ को ‘मदन पुरस्कार’ ‘धृतराष्ट्र’ खण्डकाव्यका लागि कवि घनश्याम कँडेल र ‘जगदम्बाश्री’ पुरस्कार व्यङ्ग्यचित्रकार दुर्गा बराल ‘वात्सायन’लाई प्रदान गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
सुकुल भोजमा सँझया सिर्जनासुदूरपश्चिमको सुवास रहेनन् प्राज्ञ राई पोखरामा सुनियो सुदूरपश्चिमेली कविता
सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ बजारमा
सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको छ । यसलाई उपभोक्ताले सहजै एक हातमा लिन सकिने र एस पेनको सहायताले अझै व्यक्तिगत तरिकाबाट सम्पर्क गर्न सकिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूरा पढ्नुहोस्
मोबाइलबाट १३० च्यानल हेर्न सकिने जागिर खोज्न सरकारी वेबसाइटफेसबुकको ‘स्टोरी’ फिचर डेस्कटपमा पनिओप्पोले ‘ए ७१’ सार्वजनिक गर्दै
मेनुका ढुंगाना, आश्विन ५, २०७४
२०७३ साल मंसिर ४ गते साविकको तिमिल्सैन गाविसकी २१ वर्षीया डम्बरा उपाध्याय र पुस ३ गते साविकको गाज्रा गाविसकी १५ वर्षीया रोशनी तिरुवाको छाउपडी गोठमा ज्यान गयो । १ महिनाको अविधिमा २ महिलाको छाउपडी गोठमा मृत्यु भयो भने एक दशक (२०६३–०७४) मा ८ जना महिलाको छाउपडी गोठमा ज्यान गुमाए । प्रदेश नम्बर ७ को छाउपडी कुप्रथा धेरै मानिने अछाम जिल्लामा छाउपडी कुप्रथालाई ‘ फौजदारी अपराध’को रुपमा संसदमा विद्येयक पास हुँदा निकै चर्चा पाएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
सम्झना : ‘रोकियो’ ठाडो भाकागोल बजारअंगुरको गुलियो कथा चर्चामा तीन व्यवसाय
भारतीय सीमावर्ती दशगजासित जोडिएका बाराको गाउँहरु छतवा, विश्रामपुर, मुसहर्वा, मटिअर्वा, बलिरामपुरलगायतका क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुले चुनावको प्रचार तीब्र बनाएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मनोज पौडेल, भाद्र २९, २०७४
हिन्दू धर्मावलम्बीकाे पर्व दसैंतिहार जतिजति नजिकिँदै जान्छ, उती कृष्णदयाल ठाकुर व्यस्त बन्दै जान्छन् । रातदिन उनी माटोका विभिन्न आकृतिहरुलाई ‘भगवान’ बनाउने काममा खटिन्छन् । उनी अहिले कपिलवस्तु नगरपालिका-१ को व्यस्त चोक बजारमा पालले ढाकेर भगवानका मूर्ति बनाइरहेका छन् । आफूले मात्रै नभ्याएर ५ जना कामदार पनि राखेका छन् । कामदार पनि दिनरात नभनी काममा व्यस्त छन् । पूरा पढ्नुहोस्
मातृभाषीका आदर्श महाकवि सिद्धिदास
‘परिवर्तन भइनँ भने झन् ओरालो लाग्नेछु’ ‘रोकियो’ ठाडो भाका गल्फ नै धर्म अंगुरको गुलियो कथा
असली रुपज्याकबिनिम्बलसाथी गीत